संखुवासभा । संखुवासभाको मादी-१ खोलागाउँका एकै परिवारका ६ जनाको हत्यापछि अनुसन्धानमा जुटेको प्रहरीले हत्याको एक साता नबित्दै अभियुक्त पक्राउ गरी आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । घटनामा सफलतापूर्वक अनुसन्धान गरेको भन्दै प्रहरीले वाहवाही त कमाएको छ नै प्रहरीले छोटो समयमै कसरी हत्याराको पहिचान गर्यो भन्ने कौतुहलता पनि उब्जेको हुन सक्छ । यहाँ हामीले यही पाटोलाई केलाएका छौं ।
सुरुमै उनीप्रति आशंका गरिनुको पहिलो कारण हो, मृतक तेजबहादुर कार्कीको शव भएको ठाउँ । उनले जुन ठाउँमा तेजबहादुरको शव छ भनेका थिए, त्यो ठाउँबाट शव देखिँदैनथ्यो । त्यसो भए उनले कसरी त्यो ठाउँमा शव छ भने त ? प्रहरीले उनको यो भनाइलाई नोटिस गर्दै उनलाई शंकाको घेरामा राखेको थियो । र, भित्री रूपमा जवाफ पनि खोजिरहेको थियो । तर, उनको हाउभाउ, व्यवहार, शारीरिक अवस्थाका कारण प्रहरी आफै अलमलमा परेको थियो ।
जुन ठाउँमा तेजबहादुरको शव भेटिएको थियो, त्यहाँबाट २५-३० मिटरको दूरीमा सासुबुहारीको शव भेटिएको थियो । सय मिटरको दूरीमा नाबालक नाबालिकाको शव भेटिएको थियो । ८४ वर्षीय वृद्धाको घरमै हत्या भएको थियो । यो विषयलाई पनि प्रहरीले गम्भीरताका साथ लिएको थियो । घटनास्थललको गम्भीर पाटो केलाउने क्रममा प्रहरी टोली चिनेजानेको मान्छेकै हातबाट घटना भएको निष्कर्षमा पुगेको थियो । अझ प्रहरी टोली एक कदम अघि बढेर यसमा मानसिक रूपमा अस्वस्थ व्यक्तिको संलग्नता रहेको ठहरमा पुगेको थियो । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: सोमवार, भदौ २८, २०७८, ११:०९:००
संखुवासभा हत्या प्रकरण: अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने नै अभियुक्त, यत्रो नरसंहार एक्लै ?
लोकबहादुरले बौदमान कार्कीको परिवारका चार पुस्ताको हत्यामा आफ्नो संलग्नता स्वीकार गरेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीले बताएका छन्। पुरा पढ्नुहोस्